LWETYATHANGA LWENTSIMBI ENGABONAKALI - Umatshini wokuhambisa umbane waseSingapore
Imizi-mveliso yeConnexus ikuvumile ukuqhubekeka neVC Brand yeeTyathanga zensimbi. UVC Brand uthi indlela yokuvelisa esemgangathweni, kunye nobomi beenkonzo ezinde. Olu hlobo lwemveliso lubandakanya oku kulandelayo:
? Gqibezela iiRivet Fit Rivets
? Izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni ophezulu kunye nokunyanga ubushushu
? Izinto eziMgangatho oPhezulu eziBalulekileyo kunye nokunyanga ubushushu
? Ngokukodwa eyakhelwe ukumelana nesantya esiphezulu, Impact izicelo
? Yenzelwe iNkxaso eyandisiweyo yobomi bemihla ngemihla kwizicelo zeShukela Mill
I-Inco Cast alloy yentsimbi kunye neHadfield manganese yamatsheyini okusila ayilelwe ezona nkonzo zinzima kwizicelo zokulungisa iinkuni namhlanje. Ziyilelwe ukuphatha ukunxiba okugqithisileyo, imithwalo ephezulu yokuqina kunye nefuthe elibi. Amandla ethu okubumba okuncamathiseleyo kwikhonkco kususa naliphi na ithuba lokudala ubushushu ngokuchaphazela imimandla; Nangona kunjalo, izinto ezinokuthengiseka ngokulula zinokuvunyelwa ukuvumela amaxesha okukhawulezisa ukutshintsha kokuncamathiselwa kwesiko. Zonke izixhumanisi zethu ze-cast ziye zahlutha intloko kunye neerivet ziphelisa ukukhuselwa kwicala lokunxiba kwii-rivets. Oku kusivumela ukuba siphalaze amakhonkco kunye namacandelo eminqamlezo enzima ukongeza kumandla onke kumatyathanga kunye nokwenza iindawo ezinkulu zokuhambisa imithwalo kwindawo enkulu yokunciphisa ukunxiba kwimivalo esecaleni.